के मेरो बिरालो म्याऊ छैन? Noti बिरालाहरू
एक दिन तपाईं उठ्नुभयो र याद गर्नुहोस् कि कसरी तपाईंको बिरालोलाई के हुन्छ। उसले तपाईलाई केहि भन्न कोशिस गर्दछ, तर ऊ आवाज गर्न सक्दैन। तपाईलाई घाँटी सम्बन्धी समस्या छ? यो पक्कै पनि एक सम्भावना हो, तर अरू पनि छन् जुन दिमागमा राख्नुपर्दछ.
त्यसोभए थाहा पाऔं किन मेरो बिरालो म्याऊ छैन, र हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो निको हुनको लागि के गर्न सक्छौं।
1 बिरालोहरू म्याउ हुने काम कहिले गर्ने?
2 बिरालाहरूको म्याऊ, यसको मतलब के हो?
3 मेरो बिरालो जब एक्लो हुन्छ, किन?
4 मेरो बिरालो ढोकामा रोक्न रोक्दैन, के गर्ने?
4.1 यदि यो घरको अगाडिको ढोका हो भने ...
4.2 यदि यो घरको अन्य कुनै ढोका हो भने ...
5 मेरो बिरालो रोकिन्छ जब यो बालुवा जान्छ, के कारण छ?
6 किन बिरालोहरू राती आउँछन्? र यो कसरी जोगाउने?
7 किन मेरो बिरालो म्याऊ छैन?
7.1 ऊ बिरामी छ
7.2 तनाव छ
7.3 यो एक बिरालो हो कि meow छैन
बिरालोहरू म्याउ हुने काम कहिले गर्ने?
म्याऊ बिरालाहरूको चरित्रको ध्वनि हो, तर जे होस् हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो लाग्छ, यो ती कलाहरू मध्ये एक हो जुन उनीहरूले कम्तीमा पनि प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू म्याभ गर्न थाल्छन् जब उनीहरू धेरै सानो देखि जन्मेका हुन्छन्यद्यपि यो सत्य हो कि यस्तो प्रारम्भिक उमेरमा म्याउ भन्दा पनि बढी उनीहरूको आमाले उनीहरूलाई भेट्न आउँछन् ताकि तिनीहरू चुस्ने र / वा चिसोबाट जोगिन सक्नेछन्।
दिनहरू र विशेष गरी हप्ताहरू बित्दै जाँदा, त्यो श्रीक, त्यो धेरै उच्च पिचका हताश रुवाइ, अझ विकसित "म्याऊ" बन्नेछ। र जसो साना बच्चाहरू बढ्न जारी राख्छन्, उनीहरूले मौखिक भाषा प्रयोग गर्छन् जब उनीहरू चाहन्छन् / खोज्छन् / केहि चाहिन्छ।
बिरालाहरूको म्याऊ, यसको मतलब के हो?
मानिसहरु आफैंलाई व्यक्त गर्न बिभिन्न शब्दहरु प्रयोग गरी नै, बिरालोले आवाजको विभिन्न टोन प्रयोग गर्दछ। यस प्रकार, उदाहरणका लागि हामी जान्दछौं कि:
लामो कम मेयो, कराएको जस्तै: यो एक खतरा ध्वनी हो, ठूलो संघर्ष (झगडा) बाट बच्नको लागि प्रयास गर्नु जुन नराम्ररी अन्त्य हुन सक्छ।
Snarl: यो छोटो वा लामो हो। अघिल्लो जस्तै उस्तै कारणका लागि उनीहरू यो गर्छन्, तर यस अवस्थामा, सबै भन्दा डरलाग्दो बिरालाहरू यसलाई गर्न अधिक सामान्य हुन्छ।
दुखाइको चिच्याई: यो एक धेरै उच्च पिच, अचानक, र धेरै ठूलो चिल्ला छ। तिनीहरूले यो गर्छन् जब तिनीहरूले पीडा महसुस गर्छन् (उदाहरणका लागि, जब एक मानव दुर्घटना मा यस कदम) वा संभोग पछि।
»Miaou dry सुक्न: एक छोटो म्याव, आवाजको सामान्य टोन (न त उच्च पिच र न त पिच)। यसको एक मात्र अर्थ छैन: यो साधारण अभिवादन हुन सक्छ, वा तपाईं कसैको ध्यान चाहानुहुन्छ, वा तपाईंले म्याऊ गर्नुभयो किनभने तपाईंले केही देख्नु भएको छ।
छोटो तर निरन्तर मेउहरू: केहि अलि लामो हुन सक्छ, तर आवाजको आवाज खुशी छ, यो केही छिटो छ। जब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हामी उनीहरूलाई एउटा विशेष खाना (उदाहरणका लागि भिजेको खाना) दिन गइरहेका छौं, वा जब उनीहरू हामीलाई हेर्दा धेरै खुसी हुन्छन् उनीहरूले यो उत्सर्जन गर्छन्।
मेरो बिरालो जब एक्लो हुन्छ, किन?
जब एक्लो महसुस हुँदा बिरालोले छोडिन्छ, उसले यो हुनबाट रोक्नको लागि ठीकै गर्छ। म्याउ एउटा वेक अप कल हुन्छ, "मेरो छेउमा आउनुहोस्" वा "मलाई एक्लै नछोड्नुहोस्।" यदि ऊ बुढो छ, त्यो हो, यदि ऊ दस बर्ष वा ठूलो छ भने, ऊ हुन सक्छ senile डिमेंशिया.
मेरो बिरालो ढोकामा रोक्न रोक्दैन, के गर्ने?
यदि यो घरको अगाडिको ढोका हो भने ...
यदि यो त्यस्तो जनावर हो जुन उसको जीवनको कुनै समय विदेशमा रहेको छ भने स्वतन्त्रताको भावनाले यसलाई कहिल्यै भुल्दैन। तसर्थ, जब ऊ ढोकामा बन्द गर्दछ, यो प्राय: किनभने ऊ बाहिर जान चाहन्छ। त्यसो भए, निराश हुनबाट जोगिन, तपाईंले के गर्न आवश्यक हुनुहुन्छ उहाँसँग गुणस्तर समय बिताउनु हो, दिनको कम्तिमा एक घण्टा उहाँसँग खेल्नुहोस्, हामी टेलिभिजन वा विस्थापनको बखत उहाँ सोफेमा आउनुहोस्,… छोटकरीमा भन्नुपर्दा, हामी उहाँसँगै जीवन बिताऔं।
यदि यो घरको अन्य कुनै ढोका हो भने ...
कुनै बिरालाले बन्द ढोका मनपर्दैन, किनकि तपाईंले पूर्ण तपाईंको »क्षेत्र। लाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यसले तपाईंलाई सुरक्षा दिन्छ। त्यसोभए यदि उसले घरको ढोका ढकढक्याउँछ र त्यस बन्द कोठामा कुनै खतरनाक कुरा नभएसम्म, त्यसलाई खोल्नुहोस् 😉
मेरो बिरालो रोकिन्छ जब यो बालुवा जान्छ, के कारण छ?
बालुवा र ट्रेको मुद्दा जटिल देखिन्छ। यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि बिरालाहरूलाई मनपर्दैन कि तिनीहरूको निजी शौचालय फोहोर कचौराको छेउमा छ, वा तिनीहरूको खाना, वा शोर वा व्यस्त कोठामा।.
थप रूपमा, अधिक प्राकृतिक बालुवा र कम धुलो यो रिलिज, राम्रो। सुगन्धित र कम-गुणवत्ता वालेबाट बच्नुहोस्। पिसाब वा नराम्रो गन्ध लिन नसक्ने सामान किन्नु भन्दा केही बढी खर्च गर्नु राम्रो हो। त्यहाँ धेरै प्रकारका हुन्छन्, र यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि प्रत्येक बिरालाको प्राथमिकता छ, त्यसकारण धेरै पैसा खर्च गर्नबाट जोगिन, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि उनीहरूसँग प्रायः रहेको प्रस्तावहरू एक नजर राख्नुहोस्, विशेष गरी पशु उत्पादनहरूका अनलाइन स्टोरहरूमा ताकि तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
र खैर प्रत्येक दिन पेशाब र मल निकाल्न नबिर्सनुहोस्, र हप्तामा एक पटक ट्रे सफा गर्नुहोस्।
तर यदि सबै कुरा ठीकठाक छ र उसले अझै पनि मजा गर्छ भने उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजान नहिचकिचाउनुहोस् किनकि हामी केही कुरा गरिरहेको हुन सक्छ। सिस्टिटिस वा संक्रमण।
किन बिरालोहरू राती आउँछन्? र यो कसरी जोगाउने?
त्यहाँ दुई सम्भावित कारणहरू छन्:
यो संभोगको मौसम हो, जससँग गैर-शुद्ध बिरालाहरू तातोमा हुनेछन् र बिरालाहरूले तिनीहरूलाई फेला पार्न प्रयास गर्नेछन्।
वा यो त्यो हो तिनीहरू एक्लो महसुस गर्छन्.
यदि यो पूर्व हो भने, तिनीहरू कास्ट गर्न सकिन्छ (जुन प्रजनन ग्रंथिहरू हटाइन्छ) र यसरी उनीहरूले अब यो जोडीको आवश्यकता पर्दैन। तर यदि यो पछिल्लो हो भने तपाईंले गर्नु अघि हामीले यो भनेको होः उनीहरूसँग गुणात्मक समय खर्च गर्नुहोस्।
किन मेरो बिरालो म्याऊ छैन?
ऊ बिरामी छ
बिराला र मान्छेले केही रोग बाँडछन्, र ती मध्ये एक हो laryngitis, जो घाँटी को एक जलन पैदा गर्दछ। यदि तपाइँ खानुहुन्छ वा धेरै चिसो केहि पिउनुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ शरद orतु वा जाडोमा त्यसो गर्नुभयो भने, तपाइँ एफोनियासँग समाप्त हुने जोखिम धेरै बढी हुन्छ। अब सामान्य कुरा केहि दिनमा यो हुन्छ।
अर्को कारण यो हुन सक्छ जोडिएको। हो, यो अलि अनौंठो लाग्न सक्छ, तर तनावको उच्च डिग्रीले तपाईंको साथीलाई उसको आवाज गुमाउनेछ। यदि तपाईं हार्स मेयो सुन्नुहुन्छ भने, यो सम्भवतः उसको तालिका र / वा वातावरणमा परिवर्तनप्रति प्रतिक्रिया गर्ने उसको तरिका हो। उदाहरण को लागी, यदि परिवार को एक नया सदस्य है, या यदि तपाईं चल रहे हैं, यो बिरामी को लक्षण देखाउन सक्छ ... र स्वस्थ पनि हुन सक्छ। यसको मतलब यो हो कि, एफोनियाको थपमा तपाईलाई बान्ता, पखाला, र / वा भोक पनि आउन सक्छ।
बिरालाहरूलाई तनावबाट कसरी जोगाउने?
यद्यपि कहिलेकाहिँ यस्तो हुन्छ कि बिरालोको एफोनिया बन्द हुँदैन। यो तबदेखि हामीले चिन्ता लिनुपर्नेछ, किनकि तपाईलाई एक रोग लागेको हुन सक्छ जसको उपचार गर्नु आवश्यक छ। गम्भीर श्वासप्रश्वासको संक्रमणको एउटा कारण चिढचिढ्ने ग्यासहरूको इनहेलेसन हो, त्यसैले यो परीक्षण र उचित उपचारको लागि पशु चिकित्सकमा लिनु पर्छ।
कुनै मामला मा तपाईं स्वयं औषधी हुनेछकिनकि मानिसका लागि औषधीहरू उसको लागि घातक हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्, यदि यो 5--6 दिन भन्दा बढिमा रहन्छ भने, यो एक विशेषज्ञ द्वारा जाँच गर्नका लागि सल्लाह दिइन्छ।
यो एक बिरालो हो कि meow छैन
त्यहाँ बिरालाहरू छन् जुन म्याव गर्दैन, वा त्यो गर्छन् तर आवाजको धेरै कम आवाजमा, वा त्यो कुराकानी मात्र गर्ने छैन।। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू बिरामी छन्। र, जहाँ फ्यारीहरू धेरै छन् कि धेरै छन्, त्यहाँ अरूहरू छन् कि लजालु हुन सक्छ वा mewing me not अभ्यस्त भयो।
तसर्थ, यदि हामी बिरालालाई ग्रहण गर्दछौं यदि यो एक परिवार संग बसेको छ, यद्यपि यसले धेरै ध्यान दिएन, वा यदि यो सडकमा भएको कुनै जनावर हो भने, यो सामान्य छ कि यो meow गर्दैन वा त्यसो गर्दैन। धेरै कहिले काँही। म तपाईंलाई भन्नेछु कि मेरो बिरालाहरू, शाशा र केशा, जब तपाईं "लेटिटा" भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ, तपाईंले मात्र तिनीहरूलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। र मेरो बिरालो बग जब ऊ साँच्चिकै खेल्न चाहन्छ (र उसको मुखमा आफ्नो हावामा हाँसो छ)। दिनको बाँकी, केहि पनि छैन। तपाईं तिनीहरूलाई पहिले नै हताश तरिकामा कल गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू म्याउनेछैनन्। एक पटक भन्दा बढि मैले मोबाइल लिएको छु कि उनीहरू साँच्चिकै घरमा छन् कि छैनन् भनेर जान्नलाई नै छन् (ती बिरालाहरूले ए GPS हार).
त्यसैले केहि छैन। चिन्ता नगर। यदि यो त्यस्तो बिरालो हो जुन सधैं माउन्ट भएको छ र अचानक रोकिन्छ, वा हर्स हुन्छ, वा तपाईंलाई यो रोग लागेको छ भन्ने शंका लाग्छ भने डाक्टरलाई लैजानुहोस्; तर यदि तपाईंले यो कहिले नगर्नु भएको र पूर्ण सामान्य जीवन जिउनु भयो भने, केहि पनि हुँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » किन मेरो बिरालो म्याऊ छैन
नमस्ते, उनीहरूले मलाई जन्मदिनको बिरालाको बच्चा दिए र मैले कहिले पनि प्रयोग नगरेको हुनाले, जब म बालक थिएँ त्यस बेलादेखि नै मैले यस्तो गरें र यसले कुनै आवाज पनि ल्याउँदैन, हामीले सोचे कि यो मौन थियो 🙁 तर मलाई थाहा थिएन कि यसले समस्या हुन सक्छ, हप्ताको अन्तमा हामी यसको पहिलो खोपको लागि पशु चिकित्सकलाई लिनेछौं, मलाई आशा छ कि सबै ठीकठाक छ
चिन्ता नलिनुहोस् यदि ऊ म्याव गर्दैन भने - सबै बिरालोले गर्दैन।
यदि ऊ सामान्य जीवन बिताउँछ र राम्रो देखिन्छ भने, मलाई लाग्दैन कि उहाँसँग केहि छ -
मेरो बिरालोलाई थाहा छैन तर जब ऊ झ्याल बाहिर हेर्छ र जब बन्द ढोका हुन्छन्, अन्यथा ऊ लगभग एक बर्षको उमेरमा म्याव गर्दैन
त्यहाँ बिरालाहरू छन् जुन म्याव गर्दैन वा यो धेरै विरलै गर्दछ।
यदि तपाईं सामान्य जीवन बिताउनु हुन्छ र राम्रो हुनुहुन्छ भने चिन्ताको विषय त्यहाँ केही छैन।
मेरो बिरालोले गट्टरल आवाज निकाल्न शुरू गर्यो, यसले मेयो गर्दैन, मलाई थाहा छ, मैले याद गरे कि यसले मेयाउन प्रयास गर्दछ र एउटा खर्राट बाहिर आउँदछ। खानुहोस् र सधैं जस्तो गर्नुहोस्
सिल्विनालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंले नहुन सक्ने चीज निगल्नु भएको हुन सक्छ, वा तपाईंको शरीरमा कतै दुखाइ हुन सक्छ। यदि ऊ मितिमा सुधार भएको छैन भने सिफारिश गरिन्छ कि तपाईंले पशुचिकित्सकलाई देख्नुहुनेछ।
पाउला कास्टिल्लो भन्यो
नमस्कार, दुई महिना अघि उनीहरूले मलाई एउटा बिरालोको बच्चा दिए, अहिले यो months महिना पुरानो हो र यो कहिले पनि सामान्य बिरालो जस्तो मिल्दैनथ्यो, सुरुमा हामीले सोच्यौं कि यो मौन थियो, जब यसलाई केहि चाहिन्छ भने यसले हामीलाई जताततै पछ्याउँदछ र यसको थकाइ खोल्दछ भने। मीनिंग थियो। । । ऊ एकदम राम्रो छ र धेरै बिरालोले नगर्ने काम गर्छ
ऊ कारमा, आफ्नो पाखुरामा सवार हुन मन पर्छ र लुगा लगाउँदछ। । । तर म अझै चिन्तित छु कि ऊ मर्न दिँदैन
पाउला कास्टिलोलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ बिरालाहरू छन् कि meow छैन। यदि तपाईं सामान्य जीवन बिताउनु हुन्छ र खुसी हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ।
नमस्ते! चार महिना अघि हामीसँग एउटा बिरालाको बच्चा थियो जुन व्यावहारिक रूपमा नवजात शिशुको घरमा आएको थियो, उनले कहिल्यै स्याउँदैन, उनी केवल गट्टरल आवाज बनाउँछिन् ... बाँकी उत्तम छ ... हामी के गर्छौं?
मागालीलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ बिरालाहरू छन् कि सायद म्याऊ। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू बिरामी छन्, तर तिनीहरू केवल त्यस्तै छन्।
मेरो बिरालाहरू मध्ये एउटाले अरू बिरालोहरू जस्तो meow गर्दैन।
पाउला एन्ड्रिया रुइज सेर्ना भन्यो
नमस्कार, शुभ बिहानी, मसँग बिरालो छ र धेरै दिनसम्म उनी बान्ता गर्दै छन्, म खातामा छु र जबदेखि मैले थाहा पाएँ कि म गर्भवती छु कि months महिना अगाडि र अब म रोकिरहेछु ... मलाई थाहा छैन यदि म यसलाई पशु चिकित्सकमा फिर्ता लैजान्छ
पाउला एन्ड्रिया रुइज सेर्नालाई जवाफ दिनुहोस्
हो, यो सबै भन्दा राम्रो हो। त्यसोभए तपाइँ के गलत हो भनेर जान्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको गर्भावस्था मा बधाई छ 🙂
रोजा एस्टर सिबुल्का फन्टहरू भन्यो
नमस्ते मसँग एउटा बिरालाको बच्चा छ कि--दिनको बच्चा old महिना पुरानो छ तर उनीले कहिल्यै माईड्स गरेनन्, उनी मसँग मात्र पुग्छिन्, तिनीहरूले मलाई भन्छन् कि यो किनभने मलाई उनको आमालाई सिकाउने आमा थिएन किनकि मलाई थाहा छैन। के गर्ने किनकि जब म उसलाई भेट्न सकिनँ, म उसलाई कल गर्न थाल्छु ऊ दौडिन र ऊ उभिन वा मेरो खुट्टामा दौडिन ताकि म उनलाई देख्न सकें, उनी घण्टी लगाएर उनी कहाँ थिई भनेर जान्न थिईन् तर मलाई थाहा थियो कि यो थियो खराब, मलाई के गर्ने थाहा छैन, कृपया, यदि कसैलाई केहि थाहा छ भने, धन्यवाद।
रोजा एस्टर सिबुल्का फ्युएन्टहरूलाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो रोजा एस्टर।
त्यहाँ बिरालाहरू छन् जुन कहिले देखा पर्दैन, चाहे उनीहरू आफ्नी आमासँग हुर्केका थिए कि थिएनन्। यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू स्वस्थ छैनन्, तर तिनीहरू केवल मेयो 🙂 गर्दैनन्।
घण्टी हो, यो खराब छ। मध्यम अवधिमा यसले उनीहरूलाई धेरै असुविधा उत्पन्न गर्दछ। यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि बिरालाले m मिनेट टाढाबाट माउसको आवाज सुन्न सक्षम छ; घण्टी लगाउँदा तपाईको केही फाइदा हुदैन।
इसाबेला हर्नान्डेज भन्यो
मैले सडकमा २ महिना पुरानो बिरालाको बच्चा भेट्टाएँ तर ऊ हिंडे तर उनले मेउड गरे तर जब उनी months महिनाको थिए म उसलाई अनुमति दिएँ र ऊ क्यारिज्म्याटिक थियो र यदि ऊ सामान्य अवस्थामा दियो भने मलाई थाहा छैन हामीले उसलाई लैजानु पर्छ कि भनेर। पशु चिकित्सक वा के हुन्छ वास्तवमा ऊ देब बिरालाहरूसँग बस्दछन् कुल total हो मलाई थाहा छैन कि त्यो किन हो वा के कारण हो।
इसाबेला हर्नान्डेजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, केवल एक हप्ता अघि मेरो परिवार र मैले सडकमा एक्लो एक बिरालाको बच्चा लिएका छौं। हामीले उनलाई सँधै निराश भएर सुनिरहेका थियौं र आमाले उनलाई खुवाउँदैनथ्यो, र हामीले उनलाई राख्यौं र उनको हेरचाह गर्यौं।
तथ्य यो हो कि उहाँ आइपुग्दा हामीले एक पटक पनि उनको मेयो सुनेका छैनौं र हामी जान्न चाहन्थ्यौं कि यो कुनै समस्या हो कि पशु चिकित्सकले परामर्श गर्नुपर्छ।
बिराला एक महिना पुरानो हो र हामीले उनलाई भित्र नपुगुञ्जेल सम्म उसले केही हप्ता सडकमा पूर्ण रूपमा एक्लै एक्लैले बिताएको छ, सायद खानेकुरा बिना र सायद चिसो नभएको।
हामी जान्न चाहन्छौं कि तपाईलाई समस्या छ वा यदि केही दिन पछि यो टाढा जान्छ।
होईन, यो कुनै समस्या हैन कि त्यसले मलाई रोक्न रोक्यो। वास्तविकतामा, बिरालाहरू जसले सुरक्षित र खुशी महसुस गर्दछ केवल कम मात्र म्याउ (नमस्कार भन्न, जब तपाईं उनीहरूलाई एउटा क्यान दिनुहुन्छ, ...)।
चिन्ता नगर्नुहोस् 🙂
करेन सेसिलिया भन्यो
मेरो बिरालाको बच्चामा बिरालाको बच्चाहरू थिए र करीव days दिन पछि उनले स्क्रिच वा म्याऊ गर्न थाली तर उनको सुन्न पाइनन् र उनी दुई दिन भइन् र उनी अब पूर्णरूपले सुनेकी थिइनन्।
मलाई थाहा छैन के गर्ने, उनी बिरामी छैनिन वा उनीसँग के छ र सत्य मलाई डर छ कि ऊ मर्नेछे
करेन सेसिलियालाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ बिरालाहरू छन् जुन कलिलो उमेरदेखि नै म्याउ हुन्छ, अरूले कहिले पनि गर्दैनन्, र अरूले मलाई रोक्न रोक्दछन्।
यदि यसबाट रोकिनुको अलावा, तपाईंले देख्नुभयो कि उनले आफ्नो भूक हराएकी छिन वा उदास देखिन्छिन्, उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान नहिचकिचाउनुहोस्।
म २ महिनाको लागि बिरालाको बच्चा भएकी छु। उहाँ आफ्नी आमा र भाइहरूसँग धेरै समय बिताउनुभएको थियो। वास्तवमा, उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नी आमाको नजिक हुनुहुन्थ्यो। अब उनी मसँग एक्लै छिन् र उनले मलाई पहिलो दिनहरू भनेकी थिइन, तर उनी दिनका लागि छैनन्। उनले आफ्नो मुख मोआव खोल्छिन् र आवाज धेरै कमजोर रूपमा बाहिर निस्किन् जस्तो कि उनी हर्सिया थिए। हुनसक्छ उनी आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको साथ हुनसक्छिन्, हुनसक्छ उनी अधिक सक्रिय थिइनन्। अब जब समय आउँछ कि म उसलाई एक्लै छोड्छु ... सायद उनी मौन बानी भइसकेको छ। यो सामान्य हो? वा म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान्छु? धन्यबाद
खलीसीलाई जवाफ दिनुहोस्
यो सायद केहि छैन, तर मात्र केसमा म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु यसलाई लिनुहोस्। उपचार गर्नु भन्दा रोक्नु उत्तम हो।
नमस्कार, मैले एउटा बिरालाको बच्चालाई अपनाए र सबै कुरा सामान्य थियो एक दिन उसले धेरै शरारत गर्न थाल्छ र छींक लाग्दछ, म उसलाई पशु चिकित्सकमा लग्यो र उसले मलाई भन्यो कि यदि मैले क्लोरीन सफा गरें भने उसले यसलाई मेटाउनेछ र समस्या समाधान भयो अब ऊ होईन लामो छुकान्छ तर उसले अझै सबै आँखा एक आँखामा पाउँदछ र कहिलेकाँही उसले यसलाई खोल्न सक्दैन, म उसको लागि सफा गर्छु र ऊ निको हुन्छ तर दिउँसो ऊ सुस्त छ, ऊ निदाउँछ र निदाउँछ र म्याउ गर्दैन, ऊ ऊ चाहन्छ कि उसले चाहन्छ तर उसको मेयो बाहिर आउँदैन म चिन्तित छु किनकि ऊ दुई महिना पनि टुटेको छैन र म उसलाई मर्न चाहन्न किनभने मेरो बच्चाले उनलाई प्रेम गर्थे र ऊ एकदम आज्ञाकारी छ, यो के हुन सक्छ?
नेयलालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई आन्द्रा परजीवी (गँड्यौला) हुन सक्छ। त्यो उमेरमा तिनीहरू धेरै सामान्य हुन्छन्। पूर्ण चेक-अपको लागि तपाईंले पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ र उपचारमा राख्नु पर्छ।
मेरो बिराला म्याऊ छैन
उसले आफ्नो मुख थाल्छ तर आवाज निस्किहाल्छ, मलाई थाहा छैन यो छ किनभने २ बिरालाको बच्चा अचानक घरमै अचानक आइपुगेको छ
ऊ हिंड्दछ, सामान्य रूपमा खान्छ तर म डराउँछु कि पछि उनलाई आज सुन्ने बित्तिकै यो खराब हुँदै जान्छ
त्यहाँ बिरालाहरू छन् जुन म्याव गर्दैन, वा ती यस्तो अल्छी गर्दछ कि उनीहरूलाई सायद सुन्न सकिन्न।
यदि ऊ पूर्ण रूपमा सामान्य छ भने चिन्ता नगर्नुहोस् don't
नमस्कार, मसँग बिरालो छ जुन मैले दुई महिनाको भएदेखि हुर्काएको थिएँ ... अब यो months महिना पुरानो हो र राम्रो छ, यसले कहिल्यै काम गरेको छैन, यो सामान्य हो।
हो यो सामान्य हो। त्यहाँ बिरालाहरू छन् कि meow छैन।
नैन्सी Mireya Cetina सान्तामेरिया भन्यो
नमस्कार शुभ दिन; मसँग एउटा बच्चाको बच्चा छ जो मसँग years वर्ष पुरानो हो, मैले उसलाई धर्मपुत्र बनाएको हुनाले मैले उनलाई स्वीकारें र उनी धेरै चंचल र जागिर थिईन् तर उनीले दुई दिनसम्म मेरो लागि खाटमा बस्न पाइनन्। सामान्य भन्दा बढी; म months महिनाको गर्भवती हुँ र दुई महिना अघि एउटा नयाँ बिरालो घरमा आई, जसलाई उसले पहिले नै स्वीकार गरी। म मेरो लोलिताको बारेमा चिन्तित छु, यद्यपि उनी खाउँछिन्, बाथरूममा गइन् र आफै हेरचाह गर्छिन्, ऊ पहिले जस्तो छैन। उसलाई के हुन सक्छ ????
नैन्सी Mireya Cetina Santamaria जवाफ
माफ गर्नुहोस्, म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दिन, तर मलाई थाहा छैन यो के हुन सक्छ। उसले भर्खरै "नराम्रो" समय बिताइरहेको हुन सक्छ, तर जे भए पनि म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजान सिफारिश गर्दछु।
उनीहरूले मलाई एक हप्ता अघि करीव २- months महिनाको बिरालोको बच्चा दिए र यो म्याव गर्दैन, यसले आफ्नो मुख खोल्छ र धेरै कम, लगभग अव्यवसायिक कर्कश आवाज उत्पन्न गर्दछ। यो मौन हुनेछ? उनी धेरै स्वस्थ छिन्, उनी खाउँछिन्, सुते र खेलिन्छिन् र उनी सहज देखिन्छिन्। म के गरूँ, धन्यवाद!
त्यहाँ बिरालाहरू छन् कि म्याव गर्दैन, वा ती यस्तो नरम रूपमा गर्दछ कि तपाईं सायद तिनीहरूलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो सामान्य हो।
यदि तपाईं खानु, सुत्न, र सबै ठीक छ भने चिन्ताको विषय त्यहाँ छैन।
अभिवादन र बधाई 🙂
नमस्कार, मेरो बिरालाको बच्चा जब उनी जन्माईरहेकी थिई म्याव गर्न कोशिस गर्दछु तर आवाज सुन्न पाउँदैन र यो सुन्न गाह्रो पर्यो, मलाई लाग्यो कि यसले असर गर्दैन तर अब म उनलाई धेरै चंचल देख्दिन (उनी3महिनाकी छिन), उनी उनी आफ्ना साना भाइहरूसँग खेल्दैनन्, उनी सुत्छिन्।
डामारिसलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ बिरालाहरू छन् जुन म्याव गर्दैनन् र अरूहरू जुन ती बर्षहरूमा आफ्नो आवाज गुमाउँदछन्।
तिम्रो बिरालोको बच्चालाई के हुन्छ, म तपाईंलाई एक पशुचिकित्सकसँग सल्लाह लिन सिफारिस गर्दछु, किनकि यो सामान्य छैन कि उनी to महिनाको उमेरमा खेल्न चाहँदैनन्।
अभिवादन, मलाई आशा छ यो सुध्रियो।
बिरालाहरूमा खोपको साइड इफेक्टहरू के के छन्?
एक बिरालोको बच्चा कति घण्टा सुत्छ